အချိန်ပြပုဒ် By နှင့် Until ဘယ်လို ကွဲပြားသလဲ - Myanmar Network
အချိန်ပြပုဒ် By နှင့် Until ဘယ်လို ကွဲပြားသလဲ
Posted by Betty on February 26, 2015 at 12:06 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာမှာ အချိန်ပြပိုဒ်တွေ အနေနဲ့ သုံးတဲ့ prepositionတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ နေ့နဲ့ ဆိုရင်တစ်မျိုး၊ အချိန်နဲ့ ဆိုရင်တစ်မျိုး၊ လနဲ့ ဆိုရင်တစ်မျိုး စသည်ဖြင့် ခွဲခြားပြီးသုံးရတဲ့ preposition တွေပါ။
ဥပမာ - in March, on Wednesday, at 3:00 p.m.
ဒီလိုမျိုး preposition တွေထဲမှာ deadline ဆိုတဲ့ အချိန် အကန့်အသတ်ကိုဖေါ်ပြရတဲ့ preposition ၂ လုံးဖြစ်တဲ့ “by” နဲ့ “until” တို့အကြောင်းကို လေ့လာရအောင်။ ဒီ ၂ လုံးရဲ့ အသုံးက ခပ်ဆင်ဆင်ပေမဲ့ ကွဲပြားမှု ရှိတာကြောင့် ကျောင်းသားတွေ အင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါ ခွဲခြားတတ်အောင် ဥပမာလေးတွေနဲ့ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ပထမဆုံး အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ စာကြောင်း ၂ ကြောင်းကို ကြည့်ကြပါ။
You have until Friday to submit your sales report.
You have to submit your sales report by Friday.
အဲ့ဒီ sentence ၂ ကြောင်းစလုံးမှာ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်က “သောကြာနေ့”၊ အဲ့ဒီထက် ကျော်လို့/ နောက်ကျလို့ မရဘူးပေါ့။ ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် ၂ ခုစလုံးက အဓိပ္ပါယ် ဆင်တူသလုို ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဘယ်လို ကွဲပြားသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Until ဆိုတာက နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ချိန် မတိုင်ခင် အထိရှိတဲ့ ကာလကို ပြောတာ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်တဲ့အထိပေါ့။
You have until Friday to submit your expenses (no later than Friday) (သောကြာနေ့ထက်တော့ နောက်ကျလို့ မရဘူး)
We have until the end of March to complete the plans for the project (the deadline is the end of March and not later) (သတ်မှတ်ချိန်က မတ်လကုန်။ ဒီထက်နောက်ကျလို့ မရဘူး)
Until က အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ situation or state ကိုဖေါ်ပြတဲ့ အခါလည်းသုံးပါတယ်။
I shall work on this report until lunchtime. (the report may be finished or not. It doesn’t matter) (အစီရင်ခံစာက ပြီးရင်လဲပြီးမယ်၊ မပြီးရင်လဲမပြီးဘူး။ ပြီးပြီး၊ မပြီးပြီး ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။)
By ကျတော့ time preposition ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုကို အတိအကျ “ဘယ်တော့” “ဘယ်အခါ” ဆိုတာကိုဖေါ်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။
I need those sales figures by 5pm. (on or before but no later) (အဲဒီ အချိန် သို့မဟုတ် အဲဒီ အချိန် မတိုင်ခင်)
I need to leave the office by 4pm if I am to catch my train. (on or before) (၃ နာရီထက် နောက်ကျရင် ရထားမှီတို့မှာ မဟုတ်)
Please reply to our invitation by 23 November. (၂၃ နိုဝင်ဘာလ မတိုင်ခင် အကြောင်းပြန် ရမယ်)
ကဲ…အပေါ်ကဖေါ်ပြခဲ့တာလေးတွေ ဘယ်လောက် သဘောပေါက်သလဲသိရအောင် အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတာထဲကနေ အဖြေမှန် ရွေးပေးပါဦး။
If you call me by/until 6pm, you will probably find me in the office.
The firm’s new accountant won’t be able to start by/until his other contract ends.
The company will not respond to any applications by/until the end of the closing date.
Reservations for the Board Room must be submitted to Reception by/until the close of business. (close of business = ရုံးဆင်းချိန်)
(အဖြေတွေကတော့ by, until, until, by)
Englishwithatwist.com မှ Shanthi ရဲ့ English Grammar Pill: The difference between “By” and “Until” ကို ကိုးကားဘာသာ ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် (http://englishwithatwist.com/2014/02/18/english-grammar-pill-the-di...) ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Wai Yan Maung Maung on February 26, 2015 at 14:18
အခုလိုတင်​​ပေးလို့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အသုံးကို သိခဲ့ရပါတယ်​သိခဲ့ရပါတယ်​။
Permalink Reply by kowenger on February 26, 2015 at 14:57
Permalink Reply by Min Than Htike Thu on February 26, 2015 at 16:44
Permalink Reply by Phyo Tint Aung on February 27, 2015 at 0:00
Many thanks to BC.
Permalink Reply by Marlar Aung on February 27, 2015 at 8:08
Permalink Reply by July Wan on February 27, 2015 at 10:06
Permalink Reply by KYAW TINT on February 27, 2015 at 11:34
Permalink Reply by davidnaylwin on February 27, 2015 at 15:15
Permalink Reply by mayri on February 28, 2015 at 18:19